Inrico TM-9 4G / WiFi IRN Mobile Network Radio - Network maRadio
musha / Radios / Network maRadio / Inrico TM-9 4G / WiFi IRN Mobile Network Radio
Rated 4.00 Kunze kwe5 yakavakirwa 1 kasitoma Rating
Chii chitsva, ichienzaniswa neTM-7:
Gudzanzwi rinonzwika uye rakajeka sekristaro
110V / 220V Simba Magetsi (12Vdc / 5A) ($49.00)
Compact 5W Kunze Mutauri ($49.00)
Ultra-Slim Chirongwa cheBluetooth Khibhodi ($49.00)
Inrico TM-9 4G / WiFi IRN Mobile Network Radio huwandu
SKU: TM-9 Categories: Mobile Network maRadio, Network maRadio
Iyo Inrico TM-9, ndiko kushanduka kweiyo TM-7 Plus, yakanyanya kutengesa network redhiyo.
Yakakura kune amateur radio kushandisa neiyo nyowani IRN chikuva, cheZello, Chikwata Taura 3 uye Echolink kuburikidza ne3G kana WiFi. Uye inoshanda seWiFi hotspot futi!
Iyi ichiri hamradio here? Verenga izvi chinyorwa. Iyo TM9 inogona zvakare kushandiswa kuteerera kumapurisa, dhipatimendi remoto uye kumwe kutapurirana kwakawanda. Dzidza kuti.
Iyo zvakare inoenderana zvizere neAPRS. Dzidza zvakawanda pa kuumba APRS pane iyo Inrico TM-9.
Iyo Inrico TM-9 iradio network. Iyo haina VHF kana UHF RF module.
Dzidza zvinhu zvishanu zvaunogona kuita neInrico TM Series Transceiver
Iyi network redhiyo vhezheni inoenderana zvizere ne International Radio Network (IRN)
Kuti ufambise pane vaHam vanodzokorora, iwe unofanirwa kubata rezinesi hamradio rezinesi. Kuti ushandise radio iyi pane IRN, unofanirwa kutevedzera aya matanho uye, mushure meizvozvo, gadzira iyo marongero ekuteerera. Pasi payo REKODZA tab, sarudza “Mik”Uye imi mese makagadzirira.
Unogona kuronga makiyi mabhatani kune chero basa raunoda, nekutevera yakapusa nzira. Zvakare, verenga izvi chinyorwa, kana iwe uchida kushandisa imwe maikorofoni.
Ko kana iwe uchigona kunge uine walkie talkie app pafoni yako? Ngatizvitaurirei iwe yakanakisa walkie talkie app yakamboitwa: Zello ndeye walkie talkie app yeApple, iphone, IOS uye kune zvakare zello yePC.
Iyi redhiyo-senge smartphone ine PTT inozoisa kumusoro iyo inotumira. Kusvika paunenge uine dataplan kana kubatana kweWiFi, saka iwe unenge uine mbiri nzira walkie talkie app ine yepasirese renji.
Kutanga, dhawunirodha iyo Zello app. Wobva wadzvanya yako zello PTT bhatani uye iwe uchanzwikwa!
Akangwara GSM intercom + stereo speaker
GPS + Compass chaiyo yekufambisa uye kumisikidza
■ Google kutsvaga neMepu
1 Kudzokorora nokuti Inrico TM-9 4G / WiFi IRN Mobile Network Radio
Andrew Nagle (Zvinosimbiswa muridzi) - December 6, 2020
Mushure mekushandisa redhiyo iyi kwerinenge mwedzi, ndinofara nekuita kwayo. Inobhururuka zvakanyanya nekukurumidza kupfuura zvayakatangira, yakanga iine mabhatani akashure, uye yakanaka mutauri. Izvo zvakakosha kuti uzive, zvisinei, kuti iwe unofanirwa kunamatira antenna kune redhiyo kuti ishande nemazvo.